ဧရာဝတီ| January 19, 2013 | Hits:10,981
ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီးအပေါ် သူတို့အမြင်“နောက်ကျော ဓားနဲ့ အထိုးခံခဲ့ရတာ”လူအိုတွေ နိုင်ငံရေး မလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောတဲ့ ဦးခင်ညွန့်နဲ့ …အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လူထုကို ရှင်းပြပေးဖို့ လိုတယ်“ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အလွန် အရေးကြီးတယ်” နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> မျိုးချစ်သူ January 19, 2013 - 10:58 pm	ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ အခုလို လူငယ်တွေအပေါ် စေတနာတွေ အပြည့်ထားတဲ့ စာပေသမားကို လေးစားပါတယ်ဗျာ။ လေးစားလွန်းလို့ မလေးစားပဲတောင် မနေနိုင်အောင်ပါပဲ။ တကယ့် ရည်ရွယ်ချက်ကို တော့ ဘုရားသခင်က သိပါလိမ့်မယ်။
Reply	Norea January 23, 2013 - 11:46 am	Iအမြင်အရတော့ပညာပေးချင်တာကနည်းနည်းEntertainmentအတွက်ကများများထင်ပါတယ်…Who Knows???????
Reply	mike February 2, 2013 - 1:55 pm	ဘယ်လိုငကြောင်တွေလဲကွ?ဘာမှမသိဘဲနဲ့ဒါဈေးကွက်စီးပွါးရေးကွ.
Reply	Eve February 17, 2013 - 4:12 am	They should publish playboy magazine